मैथिल समुदायमा लोक पर्व जितियाको व्रत शुरू - नेपालबहस
मैथिल समुदायमा लोक पर्व जितियाको व्रत शुरू
| १०:१३:४४ मा प्रकाशित
२५ भदौ, जनकपुरधाम । मैथली समुदायका महिलाको महान् लोक पर्व जितियाको व्रत गए रातिदेखि शुरू भएको छ । यस व्रतमा थुक पनि निल्न नहुने र ३६ घण्टा निराहार उपवास व्रतमा बसी व्रतलाई खण्डित पनि गर्न नपाउने नियम रहेकाले यो पर्वलाई कठोर पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ । विश्वविद्यालय पञ्चाङ्ग र मिथिला कलेण्डरअनुसार गए राति अष्टमीको प्रवेशदेखि शुरू भएको यो व्रत शुक्रबार ६ बजेपछि सम्पन्न हुनेछ ।
जितिया पर्व मैथिल संस्कृतिको पर्वमध्ये एउटा प्रमुख पर्व हो । यसलाई जिमुतवाहन व्रत पनि भनिन्छ । सन्तानको खुखशान्ति र चिरायुका लागि यो पर्व मनाउने चलन रहेको छ । जितिया पर्व यसकारणले पनि प्रसिद्ध छ कि यसको नियमपूर्वक पूजा गर्नाले आफ्नो सन्तानको आयु वृद्धि हुने जनविश्वास रहेको छ । विशेषरूपले आइतबार र मङ्गलवार पर्ने जितियालाई अधिक महत्व दिइन्छ । यसलाई खर जितिया पनि भनिन्छ । कुनै व्यक्ति ठूलो दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भयो भने उसको आमाले खर जितिया गरेकी रहेछिन् भन्ने मान्यता पनि रहेको छ ।
भविष्य पुराणमा वर्णन गरेअनुसार जिमुतवाहन शालिवाहन राजाका पुत्र थिए, उनीमाथि महादेवको असीम कृपा रहेकाले उनको नियमनिष्ठाले व्रत गर्ने महिलालाई सन्तान दीर्घायु हुने वरदान भगवानबाट प्राप्त गरेका थिए । आज अष्टमीका तिथिमा व्रतार्थीले पूर्णतया निराहार वसी साँझपख जिमुतवाहन , चिल र स्याल विषयक कथा स्न्ने गर्दछिन् । कथा सुन्ने बेलामा व्रतार्थीले आफ्नो पाइताला मुनि एउटा खर राख्नु पर्ने हुन्छ । कथा समाप्त भएपछि पाइताला मुनिको खरलाई ६ टुक्रा पारी तीन—तीन पटक गरी शरीरको अगाडि र पछाडि फ्याँकिने गरिन्छ । यो भावले पारिवारिक जीवन सुखमय होस् भन्ने कामना बोकेको पाइन्छ ।
नवमी तिथिमा स्नानादि गरी पवित्र भई जिमुतवाहन, चिल र स्याल र दिवंगता महिलालाई नैवेद्य अर्पण गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ । यसरी यो व्रतको पारण गरिन्छ । पारणका दिन अंकुरी ‘भिजाइएको केराउ’ सहित पकाइएको साग खाने प्रचलन रहेको छ । यसप्रकार यो व्रतले करिब तीन दिनको अवधि समेटको हुन्छ ।
व्रतको एक दिन पहिले कोदोको रोटी र माछा तथा एक दिन पछि केराउ मिसाइएको साग खानुपर्ने व्यवहारले मिथिलाको खानपान र विविधताको पहिचान पनि गराउँछ । यस्तै ओठङ्नको समयमा पानी खाने बेलामा भन्ने मन्त्रले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बीच आत्मीयताको बोध गराएको हुन्छ । चिल र स्याललाई नैवेद्य चढाइनुले पशुपक्षीप्रति समेत आत्मीयता र श्रद्धा प्रदर्शित भएको देखिन्छ ।
जनकपुरमा रेल हेर्दै, कोरोना फैलाउँदै ! २ हप्ता पहिले
सम्पन्न भयो ३६ घण्टा व्रत बसी जितिया व्रत ३ हप्ता पहिले
तीन दिने जितिया पर्वको आज कठोर उपवासमा ब्रतालु ३ हप्ता पहिले
घरमै बसेर जितिया मनाउँदै थारु महिला ३ हप्ता पहिले
जितिया पर्वले सद्भाव र प्रेमको सन्देश प्रवाह गर्छ : प्रम ३ हप्ता पहिले
चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री राउतको निर्देशन ३ हप्ता पहिले
क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्दै स्थानीय सरकार ४ मिनेट पहिले
सर्लाहीका सोह्र क्रसर उद्योग बन्द ३० मिनेट पहिले
सुनिलले केएमसीमा १९९९ र नोबेलमा १५५० रुपैयाँमा पीसीआर थालेपछि मन्त्री ढकाल तनावमा ३१ मिनेट पहिले
पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम शुरु ४० मिनेट पहिले
नेपालगञ्जको ‘वाटरपार्क’ छिट्टै सञ्चालनमा आउने ५२ मिनेट पहिले
मुर्कट्टाको राज्याभिषेक: १ घण्टा पहिले
सरकारलाई जनभावनाअनुसार काम गर्न सुझाव :शङ्कर भण्डारी १ घण्टा पहिले
प्रदेशसभा सदस्य सिग्देललाई कोरोना संक्रमण १ घण्टा पहिले
पढाइ शुल्क तिर्न नसक्दा मिस्त्रीको काम शुरु २ घण्टा पहिले
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! २ घण्टा पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला २ घण्टा पहिले
कथा: कर्णकाे बयान २ घण्टा पहिले
आज २०७७ असोज १३ गते मंगलबारको राशिफल ८ घण्टा पहिले
इरानमा कोरोना महामारीको तेस्रो चरण शुरु, ३२ प्रान्त खतरापूर्ण क्षेत्र घोषित १९ घण्टा पहिले
नेटवर्किङमा संलग्न २५ कम्पनी र ५० जना पक्राउ गर्न सिआइबीलाई पत्र १७ घण्टा पहिले
प्रदेश प्रहरी प्रमुख अर्याल संक्रमण मुक्त २० घण्टा पहिले
कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएपछि कारागारभित्रै आइसोलेसन २० घण्टा पहिले